१२ प्रतिसतलाई हात्तीपाईले जीवाणु - Pradesh Today १२ प्रतिसतलाई हात्तीपाईले जीवाणु - Pradesh Today
फागुन १४, २०७५ प्रदेश टुडे
तुलसीपुर, १३ फागुन । जिल्लाका १२ प्रतिसत नागरिकमा हात्तीपाईलेको जीवाणु भएको पाइएको छ । हात्तीपाईले रोग निवारणको लागि विगत आठ वर्षदेखि औषधी खुवाइदै आए पनि निवारणमा समस्या भएको भन्दै जिल्लामा नौ पटक हात्तीपाईले रोगको औषधी खुवाइन लागेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ । हात्तीपाईले रोगको उच्च जोखिमको रुपमा रहेको दाङ जिल्लामा यसको न्यूनीकरणको लागि आठ वर्षदेखि हात्तीपाईलेको औषधी निःशुल्क रुपमा खुवाइदै आइएको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता भने नदेखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । हात्तीपाईले रोगको निर्मूल हुने समयमा दाङमा यसको अवस्था डरलाग्दो रहेको जनस्वास्थ्य निरिक्षक ओमपी न्यौपानेले बताए । नियमित रुपमा जिल्लामा आठ वर्षदेखि औषधी खुवाइदै आएको छ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालले भने उनले भने, यो समय भनेको रोगका जीवाणु मरिसक्नु पर्ने समय हो, तर पनि हामी सबैले औषधी प्रयोग नगर्दा अहिलेसम्म खतरामा छौँ । यो समस्या शिक्षितहरुले औषधी नखादा आएको हो । उनले प्रति सय जनाका १२ जना नागरिक हात्तीपाईलेको रोगी भएको बताए । तुलसीपुरका पनि त्यहि स्थिति रहेको भन्दै १५ गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रहसमेत गरे ।
यसैबीच तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाले हात्तीपाईले रोगको निवारणका लागि थालिएको अभियानको विषयमा जानकारी दिदै सरोकारवालाहरुसँग जानकारी अन्तरक्रिया गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा पाण्डेले सबैले औषधी सेवन गरेर रोग निवारणमा लाग्नुपर्ने बताए । दुई÷तीन वर्षमा तुलसीपुरबाट हात्तीपाईले रोग निर्मूल बनाउने गरी काम थालिएको बताए । कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिदै स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालले १५ देखि १७ गतेसम्म औषधी खुवाउने अभियान नै सञ्चालन गरेको बताए । उनले त्यो अभियानमा सबै सहभागी हुन अनुरोध गरे । कार्यक्रममा सिअहेव बसन्त आचार्यले अभियान सफल पार्न सबै वडाहरुमा जनप्रतिनिधिको अगुवाई रहेको र प्रत्यक्षरुपमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले नै हात्तीपाईलेको औषधी खुवाउने भएको हुँदा ढुक्क भएर औषधी खान अनुरोध गरे । विष्णु गिरीले पहिलो दिन टोल–टोलमा औषधी खुवाइने र दोस्रो र तेस्रो दिन विद्यालय संघसंस्था कार्यालयमा पुगेर औषधी खुवाइने बताए । उनले औषधी खान छुटेकाहरुका लागि जुन कुनै समयमा पनि उपमहानगरको औषधी खाने ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख माया आचार्य, बेसका कार्यकारी निर्देशक चूर्णबहादुर बहादुर चौधरी, पत्रकार खेमराज रिजाललगायतले जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन हलवार स्वास्थ्य चौकी प्रमुख बिमल केसीले गरेका थिए । यसैबीच दाङमा १५ गतेदेखि हात्तिपाईले विरुद्धको औषधि खुवाईने भएको छ । हात्तिपाईले रोगबाट बच्न जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका एक सय वडामा औषधि खुवाईने भएको हो । घोराही उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर १५ गतेदेखि खुवाउन लागिएको हात्तिपाईले विरुद्धको औषधि सबै स्थानीय तहमा पुगिसकेको जनाएको छ । हात्तिपाईले विरुद्धको औषधि खानका लागि सहभागी हुन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद घर्तीले आग्रहसमेत गरे । १५ गते बुथमा र १६, १७, १८ र १९ गते घरभेटमा हात्तिपाईले रोगविरुद्धको औषधी खुवाउने योजना रहेको बताए । घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै यसबर्ष एक लाख ७४ हजार ३५ नागरिकहरुलाई हात्तिपाईले रोग विरुद्धको औषधी खुवाईने भएको छ ।
औषधी खुवाउनका लागि एक सय स्वास्थ्यकर्मीहरु सबै वडामा परिचालन हुने र २० गतेपछि स्वास्थ्य चौकीहरुमा पुगेर औषधी खान सकिने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य शाखा सहसहंयोजक ठाकुुर खनालले बताए । हात्तिपाईले रोग फैलनबाट रोक्न र बिरामीको संख्यामा कमि ल्याउन औषधी खुवाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।
सबैले नियमित औषधी नखाँदा पटक–पटक औषधी खुवाउने अभियान चलाउनु परेको भन्दै यस पटक स्वयम्सेविका नभई स्वास्थ्यकर्मीहरुबाटै औषधी खुवाउने योजना भएको उनको भनाई छ । क्युुलेक्स जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाईबाट हात्तिपाईले रोग लाग्ने भन्दै उनले स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार औषधी खान आग्रहसमेत गरे । हात्तिपाईले रोगविरुद्धको औषधी खाना खाएर मात्रै खानुपर्ने, दुई बर्ष माथिले खाने, गर्भवती तथा सुत्केरी र सिकिस्त बिरामीले खान नहुने उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर ५ का सचिव सन्तोष दहितको अध्यक्षतामा पत्रकार सम्मेलन भएको हो ।
गणतन्त्र दैनिक १२औँ वर्षमा
विद्यार्थीलाई सोलार टुकी वितरण